China New Energy Ngwa ihe onwunwe ụlọ ọrụ na-emepụta | Yongjie
Ngwa: batrị shei ike, njikọta, akpa igbe maka ike batrị, ike batrị ogige, pouches nke lithium ion batrị, batrị cell
Akpanaka ọkụ na-ebu ọkụ bụ mmepe mmepe nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala ụwa, yana ihe kachasị mkpa maka ịlele ọkụ ọkụ bụ alloy alloy. Ngwa nke alloy alloy na ụgbọala bụ ihe dị mkpa iji dozie ụkọ ike China, mmetọ gburugburu ebe obibi, yana arụmọrụ ụgbọ njem dị ala. Nyocha A na-ebute ngwa ngwa nke alloy alloy na fechaa nke ugbo ala ọhụrụ, yana mmepe ngwa ngwa nke ụgbọ ala ọhụrụ ga-eweta atụmanya ahịa buru ibu na mmepe nke ngwongwo aluminom. A na-akọwapụta na itinye aluminom alloy na ihe ndị ọzọ dị fechaa na imepụta ihe ọhụụ bụ ụgbọ ala ọhụụ nwere ike ọrụ teknụzụ dịka nchekwa, nchekwa ike, yana nchekwa gburugburu ebe obibi na oke ihe dị mkpa.
Aluminom alloy nwere ezigbo eletriki eletriki na oru, ma obu ihe omuma ikpo oku di nma, kwesiri maka ihe di iche iche di ike dika ihe ndi di ike, ihe ndi nwere ike, nkwenye ike nkwukọrịta, ihe ndi ozo di ocha, ndi na-ebughari redio na telivishọn, wdg A na-ejikwa ya n'ọhịa nke ngwaahịa eletriki ike dịka ngwa ọrụ akpaka.
Aluminom foil nwere ike belata ntụnyere batrị, belata nsonaazụ ọkụ, melite arụmọrụ ọnụego, ma belata nguzogide batrị dị n'ime ya na mmụba nke ime ụlọ dị ike n'oge ịgba ígwè; nke abuo, iji akwukwo alumini iji tinye batrị nwere ike ime ka ndu batrị di nma ma melite adhesion n'etiti ihe ndi na-aru oru na ndi nchikota ugbu a. Belata mmeputa ihe eji eme ihe nkiri; isi ihe dị mkpa bụ na ojiji nke aluminom foil nkwakọ lithium batrị nwere ike budata melite agbanwe agbanwe nke batrị mkpọ na ukwuu belata batrị mmepụta na-eri.
Aluminom alloy akụkụ maka ume ọhụrụ ugbo ala ndị tumadi ahụ, wheel, Chassis, mgbochi nkukota doo, n'ala, electric batrị na oche.
Iji mee ka ihe dị elu, ike eletriki eletriki ọhụrụ chọrọ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke batrị lithium batrị. Modul ọ bụla nwere ọtụtụ igbe batrị. N'ụzọ dị otú a, ogo igbe batrị ọ bụla nwere mmetụta dị ukwuu na ogo nke modulu batrị niile. . Ya mere, iji alloy alloy eme ihe dị ka ihe eji eme ka batrị batrị ghọọ nhọrọ a na-apụghị izere ezere maka nkwakọ batrị ike.
Nke gara aga: Kwes nnyefe usoro ngwa ihe
Osote: Nkwukọrịta na ngwa elektrọnik
Nkwukọrịta na ngwa elektrọnik ...